अनमोल केसीलाई मेगास्टार भन्ने÷नभन्ने विवाद चुलीमा छँदै छ । एउटा कार्यक्रममा उद्घोषकले उनलाई स्टेजमा बोलाउने क्रममा मेगास्टार भनिदिएपछि मिडियामा यसले चर्चा पायो । अनमोल मेगास्टार हुन् कि होइनन् भन्ने बहस सुरु भयो । तर, यो बहस सेलाउन नपाउँदै दयाहाङ राईको ‘आप्पा’को गीत सार्वजनिक भयो । यसमा दक्षिण भारतका हिरोलाई चिनाएजस्तो दयालाई पनि सुपरस्टार भन्दै गीत सुरु गरियो ।
कलाकार आफैँले धान्न नसक्ने उपाधिको औचित्यमाथि बहस भइरहँदा दयालाई दिएको यो उपाधिमाथि पनि कटाक्ष चल्दै थियो । तर, फिल्मको बक्स अफिसको नतिजाले यसको सालाखाला उत्तर दिएको छ । अघिल्लो हप्ता रिलिज भएको फिल्म एक हप्ता पनि नटिकी हलबाट उत्रिसकेको छ ।
१७ वटा फिल्म लगातार नाफामा गएपछि भारतमा राजेश खन्नालाई सुपरस्टार भनिएको थियो । त्यसयता भारतमा पनि कसैले उनको कीर्तिमान तोड्न सकेनन् । तर, नेपालमा यस्ता उपाधि यति सस्ता छन् कि निर्माता–निर्देशक मन मरेको जो कलाकारलाई जे पनि भनिदिन्छन् । तर, दुःखको कुरा, कलाकार पनि यसमा नाइँनास्ति गर्दैनन् । ‘आप्पा’मा दयाहाङ सुपरस्टार थिए, तर उनै सुपरस्टारको फिल्मको हलमा एक सो पनि हाउसफुल भएन । हामीलाई त यो देखेर कुरीकुरी लागेको छ, दया र आप्पाका निर्माता–निर्देशकलाई लागेको छ कि छैन, कुन्नि ?
२७ कार्तिक २०७६
नेपाल आइडल अडिसनको रमझम
लोकस्टारले दियो लोकगीतलाई नयाँ उचाइ
‘चुलबुली र गम्भीर रेखा’
०४ कार्तिक २०७६
जाडोमा उपयोगी भ्यासलिन
‘बार्बी गर्लमा नाजी गर्ल’ मिसाएपछि
सुमीको फ्लप एक्सन
सकिएकै हो त करिअर ?
जंगली बँदेल कोकिनले लट्ठ
खाजाघरको 'सेक्स मेनु'
सोमबार, ०२ मङि्सर २०७६
पहिलो यौन अनुभव
ब्युटिसियन भन्छन्,‘मेकअप भव्य कला हो’